Linus inopokana Paragon uye inoshoropodza GitHub yekubatanidzwa | Linux Vakapindwa muropa
Linus Torvalds inozivikanwa ku ari kupokana zvakanyanya nezvemaitiro uye zviyero zvinofanirwa kutevedzwa nevaya vanobatsira kugadzira Linux kernel. Uye, haawanzo kuve nemutsa kune avo vasina basa racho. Ngatirangarirei kuti munguva yakapfuura akabva pabasa rake kwechinguva kuti afungisise nzira yaakabatana nayo nevamwe vanhu.
Ino nguva, yaive Paragon Software, iyo kambani iri kumashure kweNTFS3 mutyairi, uyo akakonzera kusada kwake. Yakaziviswa yeshanduro 5.15 yeLinux kernel, ichavandudza rutsigiro rwemuno Windows faira system.
1 Shanduro yekudzivirira masisitimu (MCS)
2 Mutungamiriri aburitswe
3 Linus inotora Paragon
Shanduro yekudzivirira masisitimu (MCS)
Kuti iyi nyaya inzwisiswe, isu ticha tsanangura zvimwe zvinhu zvisina kufanira kuti munhu wese azive.
Vagadziri vemapurogiramu akaomesesa esoftware vanoshandisa vhezheni yekudzora software (Inowanzo shandiswa neyekunze mupi mugore) Iyi software inokutendera iwe kuteedzera kuti ndiani, riini uye chii chinoita shanduko.
Kana usiri chikamu chenhengo dzechirongwa, unogona kugadzira forogo, ndiko kuti, kuteedzera mafaera eprojekti kune yako yekuchengetera uye, mairi, gadzira yako wega kugadzirisa. Kana iwe uchida mhedzisiro iwe unogona kukurudzira kune manejimendi wepurojekiti yekutanga kuti aise iwo, nekufona dhonza chikumbiro.
Gore rakapera, Paragon Software aAkazivisa kuburitswa kwekodhi yemutongi, iyo yaakambotengesa, achizvipira kuchengetedza uye kugadzirisan. Idzi inhau dzakanaka sezvo dziri nani zvikuru kupfuura iyo yataive tichishandisa izvozvi.
Zvinoenderana nekambani pachayo
Iyo yazvino vhezheni inoshanda neyakajairika / yakatsikirirwa / yakakura mafaira uye inotsigira acl, NTFS magazini yekutamba. Yakawanda yekodhi yacho yaive mubazi re linux-rinotevera kubva Nyamavhuvhu 13, asi kune mamwe matinji, ayo aive mubazi re linux-rinotevera chete kwemazuva mashoma. Ndinovimba zvakanaka, hapana kudzokororwa kwakawanikwa mumiyedzo. '
Mushure mekuziviswa kweParagon, iyo Mutyairi weNTFS3 aifanirwa kupfuura nemumawara mazhinji ekudzokorodza kuti avandudze mhando yekodhi uye aite kuti ienderane nemitemo yekodhi yeimwe kernel.
Zvinotaridza kuti akazozviita.
Uye saka tinouya kuna amai vehwai.
Linus inotora Paragon
Kuti ugobatanidza mutyairi mune kernel vhezheni 5.15, Linus Torvalds yakabvunza Paragon Software kuti iite iyo dhonza chikumbiro yatakataura pamusoro. Iyo kambani yakazviita, asi kwete nenzira iyo Torvalds yaanoda.
Finn akacherekedza kutanga yaive iyo chikumbiro chekudhonza chinofanira kunge chakasainwa.
Munyika yakakwana, ichi chingave siginecha yePGP inogona kutsvaga kwauri kuburikidza neketani yetrust, asi ini handina kumbobvira ndaida.
Chechipiri, akanyunyuta kuti chikumbiro chekudhonza zvainge zvaitwa kubva pawebhu webhusaiti yebasa, iyo inogadzira yakawanda yejunk kodhi.
Github inzvimbo yakanaka yekutambira, uye inoita zvimwe zvinhu zvakanaka futi, asi kubatanidzwa hachisi chimwe chezvinhu izvozvo.
Iyewo akapikisa kushaya ruzivo rwakakwana.
Kune iye akagadzira Linux "Linux kernel merges inofanirwa kuitwa nemazvo." Uye akawedzera: «Izvi zvinoreva kuti zvakakodzera kuita meseji neruzivo nezve izvo zviri kubatanidzwa uye * nei * chimwe chinhu chiri kubatanidzwa. Asi zvinoreva zvakare ruzivo rwakakodzera nezve kunyora nekuzvipira, nezvimwe. Zvese izvo GitHub zvinokanganisa zvachose. '
Linus Torvalds anoziva zvaari kutaura nezvake, ndiye akagadzira iyo Git, software iyo pane masevhisi akaita seGitHub akavakirwa, izvozvi ndeyaMicrosoft. Uye, zvinoshamisa, zvaive nekuda kwekusawirirana neimwe sevhisi
Ini handina kumbobvira ndanyatsoda kugadzira vhezheni yekudzora chirongwa sezvo ini ndaivenga vese… Ipapo BitKeeper yakauya uye yakanyatso shandura maitiro andinovatarisa. BK yakawana yakawanda yacho nenzira kwayo uye kuve nekopi yemuno yekuchengetera uye kugovera kusangana kwakakosha zvikuru. Chinhu chikuru pamusoro pekuparadzirwa kwekutanga kudzora ndechekuti zvinoita kuti rimwe rematambudziko makuru neMCS riende - zvematongerwo enyika zvakatenderedza "ndiani anogona kuita shanduko."
BK yakaratidza kuti izvi zvinogona kudzivirirwa nekupa munhu wese dura rake. Asi BK yaivewo nematambudziko ayo; paive nesarudzo dzehunyanzvi dzakakonzera matambudziko (kutumidzazve zita kwairwadza), asi chakanyanya kudzosera kumashure ndechekuti, sezvo yanga isiri open source, paive nevanhu vazhinji vaisada kuishandisa. Saka kunyangwe hazvo takazopedzisira tave nevanochengeta kernel vanoverengeka vachishandisa BK - yaive yemahara kushandisa kune yakavhurwa sosi mapurojekiti - haina kumbobvira yawanda.
Saka pane imwe nguva ndakafunga kuti handikwanise kuramba ndichishandisa BK, asi ini ndakanga ndisingadi kudzokera kumazuva akaipa ekare pre-BK. Zvinosuruvarisa, panguva iyoyo, nepo paive nemamwe mashoma maSVV ayo akawedzera kana zvishoma kuyedza kuita kuti chinhu ichi chigovaniswe, hapana kana mumwe wavo akaita kure zvakanyanya. Ini ndaive nezvinodiwa zvekuita izvo zvaisatombogutswa zviri kure nezvakange zviripo, uye ndaive nebasawo nekuvimbika kwekodhi uye nekufambiswa kwebasa kwese, saka ndakaguma ndofunga kunyora yangu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linus inopokana Paragon uye inoshoropodza GitHub yekubatanidzwa
Marco Furio akadaro
Ndeupi mukomana anozvimba mazai anopedzisira ave Linus. Kuti anoenda pamudyandigere negumbeze rake
Pindura Marco Furio
Ivo vanogadzira chirongwa cheRE3 vakamhan'arwa neTora-Mbiri Inopindirana